हे भगवान : क्वारेन्टाइनमा दैनिक रक्सी र मासुभात चाहियो भन्दै तोडफोड…..(भिडियो सहित) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/हे भगवान : क्वारेन्टाइनमा दैनिक रक्सी र मासुभात चाहियो भन्दै तोडफोड…..(भिडियो सहित)
हे भगवान : क्वारेन्टाइनमा दैनिक रक्सी र मासुभात चाहियो भन्दै तोडफोड…..(भिडियो सहित)
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरि २२ हजार ९७८ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । यो संख्या देशभरि उपलब्ध बेडभन्दा आधा कम हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार कुल ४९ हजार १४४ वटा बेड छन् । तीमध्ये २६ हजार १६६ बेड खाली छन् ।
यो पनि – यतिका धेरै बेड किन खाली त ?
कोभिड–१९ (नोवल कोरोना भाइरस) महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राख्न कति गाह्रो छ भन्ने बुझ्न खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको अवस्था हेरे पुग्छ ।
त्यहाँ बस्नेहरूका लागि नगरपालिकाले साँझ बिहान दाल–भात, तरकारी र चिया, खाजाको व्यवस्था गरेको छ । हप्तामा एक दिन मासुको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले माग गरेपछि हप्तामा दुई पटक मासुको व्यवस्था पनि भयो । तर, यो माग पूरा भएपछि दिनहुँ मासु–भात, रक्सी र वाईफाईको माग आएको नगरस्तरीय कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सर्वदलीय सर्वपक्षीय समन्वय समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
पाकिस्तानी काण्ड,नेपालि चेलि रुँदै मिडीया मा जबर जस्ति मेरो भिडियो बनायो ! हेर्नुहोस पूरा भिडियो…